Umlinganiselo wesisindo seMaduna eNdala ufikelela kuma-191 Amapounds
Umyinge omdala wamaMelika ungama-inch ubude obude, kodwa phantse iipounds ezingama-25 ezinzima kunokuba zikhona ngo-1960, ngokwemibiko ye-2002 evela kumaziko okuLawula nokuLawulwa kwezifo (CDC). Iindaba ezimbi, ithi i-CDC kukuba i-BMI yesilinganiso (isalathisi somzimba womzimba, ifom ye-weight-for-height usetyenziselwa ukulinganisela ukukhuluphala) iye yanda phakathi kwabantu abadala ukusuka malunga nama-25 ngo-1960 ukuya ku-28 ngo-2002.
Ingxelo, Ubunzima Bobukhulu Bamazimba , Ukuphakama, kunye ne-Index Mass Mass (i-BMI) 1960-2002: i-United States , ibonisa ukuba ukuphakama komyinge womntu oneminyaka engama-20 ukuya ku-44 kwanda ukusuka kuma-5'8 nje ngo-1960 ukuya ku-5'9 kunye ne-1/2 ngo-2002, ngelixa ukuphakama komyinge womfazi oneminyaka efanayo kuye kwanda ukusuka kuma-5'3 "ngo-1960 ukuya ku-5'4" ngo-2002.
Okwangoku, ubunzima obuphakathi kwamadoda aneminyaka engama-20 ukuya ku-44 benyuke ngokuphawulekayo ukusuka kwi-166.3 iipounds ngo-1960 ukuya ku-191 iipounds ngo-2002, ngelixa ubukhulu obuphakathi kwabasetyhini beminyaka efanayo banda ukusuka kuma-140.2 iipounds ngo-1960 ukuya kuma-164.3 iipounds ngo-2002.
Nangona ubunzima obuphakathi kwamadoda aneminyaka engama-20 ukuya ku -9 yanda kwanda ngama-pounds angama-20 kwiminyaka emine edlulileyo, ukwanda kwabakhulu phakathi kwamadoda amadala:
Amadoda aphakathi kweminyaka engama-40 no-49 ayingama-27 engama-pounds kunzima ngonyaka we-2002 xa kuthelekiswa no-1960.
Amadoda aphakathi kweminyaka engama-50 no-59 ayedla ngo-28 ama-pounds angaphezu kwe-2002 ngokumalunga no-1960.
Amadoda aphakathi kweminyaka engama-60 no-74 ayingama-33 eepremu enzima kakhulu ngonyaka ka-2002 xa kuthelekiswa no-1960.
Ngokumalunga nesilinganiso semilinganiselo yabasetyhini:
Abasetyhini abaneminyaka engama-20 ukuya ku-29 babekho malunga neepesenti ezingama-29 kunzima kakhulu ngo-2002 xa kuthelekiswa no-1960.
Abafazi abaneminyaka engama-40 ukuya ku-39 babenama-25½ ama-pounds awona mkhulu kakhulu ngo-2002 xa kuthelekiswa no-1960.
Abasetyhini abaneminyaka engama-60-74 babenama-17½ ama-pounds awona mkhulu kakhulu ngo-2002 xa kuthelekiswa no-1960.
Okwangoku, ingxelo ibhalwe ukuba i-average weight weight for children is increasing:
Ubunzima obuncinane obuneminyaka eli-10 ubudala-ngo-1963 beyi-74.2 iipounds; Ngo-2002 ubukhulu bemizimba yayingama-pounds angama-85.
Ubungakanani obunzima bemantombazana oneminyaka eyi-10 ngo-1963 beyi-77.4 iipounds; Ngo-2002 ubukhulu bemizimba yayingama-88.
Inkwenkwe eneminyaka eli-15 ubudala yayilinganisa ama-135.5 iipounds ngo-1966; Ngo-2002 ubukhulu bemilinganiselo yenkwenkwe eneminyaka engama-150.3.
Intombazana eneminyaka eli-15 ubudala yayilinganisa iipisenti ezingama-124.2 ngokuqhelekileyo ngo-1966; ngo-2002 ubunzima obuphakathi kwintombazana eneminyaka eyi-134.4
Ngokwale ngxelo, iinqanaba eziphakamileyo zezingane zanda kwimihla emashumi amane adlulileyo. Umzekelo:
Ukuphakama okuphakathi kwenkwenkwe eneminyaka eyi-10 ngo-1963 kwakuyi-intshi ezingama-55.2; Ngo-2002 ubude obuphakathi komntwana oneminyaka eli-10 bekhulile ukuya kuma-intshi ama-55.7.
Ukuphakama komyinge wentombazana eneminyaka eyi-10 ngo-1963 yayingama-intshi ama-55,5; Ngo-2002 ukuphakama komyinge wentombazana eneminyaka eyi-10 kwande ukuya kuma-intshi ama-56.4.
Ngowe-1966, ukuphakama okuphakathi kwenkwenkwe eneminyaka eli-15 ubudala kwakungama-intshi ezingama-67,5 okanye malunga ne-5'7½ "; ngo-2002 ubude obuphakathi kwenkwenkwe eneminyaka eyi-15 yayingu-68.4 okanye malunga ne-5'8 kunye ne-1/2".
Ngo-1996, ukuphakama komyinge wentombazana eneminyaka eli-15 kwakungama-intshi angama-63.9; Ngo-2002 ukuphakama komyinge wentombazana eneminyaka eyi-15 yayingatshintshanga kakhulu (63.8 intshi).
I-Index ye-Mass Index Index (BMI) yabantwana kunye nentsha iye yanda kwakhona:
Ngowe-1963, umyinge we-BMI wenkwenkwe eneminyaka eli-7 ubudala wayengu-15.9; ngo-2002 bekuyi-17.0. Ngamantombazana aneminyaka efanayo, umlinganiselo we-BMI wanda ukusuka ku-15.8 ukuya kwi-16.6 ngexesha elifanayo.
Ngowe-1966, umyinge we-BMI wenkwenkwe eneminyaka eyi-16 ubudala yayingu-21.3; ngo-2002, bekuyi-24.1. Ngamantombazana ofanayo ubudala, i-BMI ephakathi ikhuphuke ukusuka kwi-21.9 ukuya kwi-24.0 ngexesha elifanayo.
I-BMI yinani elilodwa elivavanya ubunzima bomntu ngokumalunga nobude. I-BMI isetyenziselwa njengento yokuqala yokuhlola amanqatha omzimba kwaye ibe yindlela eqhelekileyo yokulandelela iingxaki zesisindo kunye nokukhuluphala phakathi kwabantu abadala.
Ukunyamezela, Ukunyamezela, nomthandazo
Iingenelelo kunye Nezibonelelo Zokufudumala Kwehlabathi